Famerenana sy famerenana amin'ny laoniny | August 2019
Avereno sary ny sary nofafana ao amin'ny Android ao amin'ny DiskDigger
Matetika, rehefa tonga amin'ny famerenana ny angon-drakitra eo amin'ny findainao na takelaka ianao, dia mila mamerina mamerina sary avy amin'ny fahatsiarovan'ny aterineto an'i Android. Talohan'io, ny habaka dia nihevitra ny fomba maro hamahana ny angona avy amin'ny fahatsiarovana an-tserasera ao amin'ny Android (jereo ny famerenana ny angon-drakitra ao amin'ny Android), fa ny ankamaroan'izy ireo dia mitarika ny programa amin'ny solosaina, mampifandray ny fitaovana sy ny dingana fanarenana manaraka.
Ny programa famerenana ny rindrambaiko R-Studio dia anisan'ny nangatahana indrindra tamin'ireo izay nila naka ireo rakitra tamin'ny rakitra mafy na media hafa. Na dia eo aza ny vidiny avo lenta, maro no tia ny R-Studio, ary azo takarina izany. Fanavaozana 2016: amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny teny Rosiana ny fandaharana, mba hahafahan'ny mpampiasa hampiasa azy io kokoa noho ny teo aloha.
Ny fandaharana mba hahasitrana ny data amin'ny Android MobiSaver Free
Amin'izao andro izao dia hampiseho fandaharana iray hafa ho an'ny fandaharan'asa fanarenana an'i EaseUS Mobisaver aho ho an'ny Android Free. Amin'izany dia azonao atao ny manandrana mamerina sary, video, fifandraisana ary hafatra SMS nalefa tamin'ny findainao na ny tablette, miaraka amin'ny rehetra izany maimaim-poana. Avy eo dia mampitandrina anao aho, mitaky ny zon'ny fototra amin'ny fitaovana ny programa: Ahoana no hametrahana zo fototra amin'ny Android.
Famerenana ny rakitra ao amin'ny R.Saver
Imbetsaka no nanoratra momba ny fitaovana maimaim-poana isan-karazany amin'ny famerenana ny angon-drakitra, amin'ity indray mitranga ity dia ho hitantsika raha azo atao ny manitsy ireo rakitra voafafa, ary koa ny angona azo avy amin'ny rakitra matanjaka ampiasain'ny R.Saver. Ny lahatsoratra dia natao ho an'ireo mpampiasa vaovao. Ny fandaharanasa dia novolavolain'ny SysDev Laboratories, izay miompana amin'ny famolavolana vokatra fanarenana data avy amin'ny fiaramanidina isan-karazany, ary dikan-teny mazava amin'ny vokatra avy aminy.
Recuva - avereno ny rakitra voafafa
Ny programa maimaim-poana antsoina hoe Recuva dia iray amin'ireo fitaovana fanarenana malaza indrindra avy amin'ny flash flash, karatra memy, rakitra mafy na fiara hafa ao amin'ny NTFS, FAT32 sy ExFAT izay manana laza tsara (avy amin'ny mpikaroka toy ny CCleaner malaza). Anisan'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fandaharana: ny fampiasana mora foana ho an'ny mpampiasa vaovao, ny fiarovana, ny fiteny rindrankajy Rosiana, ny fisian'ny dikan-teny portable izay tsy mitaky ny fametrahana eo amin'ny solosaina.
Windows tsy afaka mamita formata ... Ahoana ny fomba famolavolana sy famerenana ny flash?
Good day. Androany, mpampiasa solosaina rehetra manana USB flash drive, fa tsy iray. Indraindray dia mila asiana formata izy ireo, ohatra, rehefa manova ny rafitra an-drakitra, raha sendra diso na rehefa mila mamafa ny rakitra rehetra amin'ny karatra flash ianao. Mazàna, ity hetsika ity dia haingana, saingy mitranga izany fa misy hadisoana mitranga amin'ny hafatra: "Windows tsy afaka mamita formata" (jereo
Mafana ny laptop. Inona no tokony hatao?
Ny fiatrehana ny solosaina finday no olana mahazatra indrindra hitan'ny mpampiasa mpampiasa. Raha tsy manafoana ny antony mahatonga ny hafanana ny fotoana, dia mety hiasa tsikelikely ny ordinatera, ary hipoitra tanteraka amin'ny farany. Ny lahatsoratra dia mamaritra ny antony fototra mahatonga ny hafanana, ny fomba hamantarana azy ireo sy ny fomba mahazatra indrindra amin'ny famahana ireo olana ireo.
Raha tsy miasa ny Internet taorian'ny fanavaozana Windows ... Torohevitra sasantsasany
Good day. Rehefa manamboatra Windows vaovao, amin'ny ankapobeny, ny rafitra dia manitsy automatique maro (manangana mpamily universer, mametraka ny configurable firewall indrindra, sns.). Saingy nisy ihany ny zava-nitranga fa fotoana vitsy monja amin'ny fanoloana Windows vaovao dia tsy natsangana.
Famerenana ny rakitra miaraka amin'ny UndeletePlus
Tany am-piandohana dia efa nanoratra fandaharan'asa anankiroa aho mba hamerenana ireo rakitra voafafa, ary koa ny famerenana ny angon-drakitra avy amin'ny sarimihetsika sarimihetsika sy flash mirefodrefotra: BadCopy Pro Seagate File Recovery Amin'izao fotoana izao dia hifanakalozantsika programa hafa - eSupport UndeletePlus. Tsy toy ireo roa teo aloha, ity rindrambaiko ity dia navotsotra maimaim-poana, na izany aza, ny asa dia tsy dia lehibe loatra.
Fitaovana flash (rakitra mafy) mangataka ny formata, ary nisy ny rakitra (data) teo
Good day. Miasa miaraka aminà flash drive ianao, miasa, ary avy eo bam ... ary rehefa mifandray amin'ny ordinatera, dia hita ny fahadisoana: "Ny rakitra ao amin'ny fitaovana dia tsy apetaka ..." (ohatra ao amin'ny 1). Na dia azonao aza fa efa natsangana ilay raki-drakitra taloha ary manana rakitra ao aminy (rakitra tahiry, antontan-taratasy, arisiva, sns.
Azo atao ve ny maka ny data avy amin'ny karatra SD natokana ho fahatsiarovan-tsaina ao amin'ny Android?
Ny dikan-teny maoderin'i Android dia mamela anao hametraka ny karatra SD karaha ho fahatsiarovana ao anaty findainao na ny tablette, izay ampiasain'ny maro raha tsy ampy. Na izany aza, tsy ny rehetra no mahatsikaritra lozam-pifaneraserana manan-danja: amin'ny fotoana iray ihany, mandra-pifaneraserana ny formata manaraka, ny karajia fahatsiarovan-tena dia mifamatotra manokana amin'io fitaovana io (izay midika hoe ity manaraka ity ao amin'ny lahatsoratra).
Kitiho ny kitiho (tsindrio): ataovy toy ny famerenana ny solosaina amin'ny ordinatera
Ny fanalahidy indrindra ampiasaina amin'ny teknolojian'ny ordinatera dia tsy isalasalana fa ny bokotra ankavia. Tsy maintsy aterena foana izy io, na inona na inona ataonao ao amin'ny solosaina: na lalao na asa. Rehefa afaka fotoana fohy, ny tsipika ankavia dia tsy mitsaha-mihetsika toy ny teo aloha, matetika dia misy doka indroa (click): taonina.
Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny famerenana sy famoahana rakitra amin'ny rakitra CD / DVD voapanga
Hello Maro ny mpampiasa efa za-draharaha, heveriko, fa misy CD / DVD vitsivitsy amin'ny tahiry: miaraka amin'ny programa, mozika, sarimihetsika, sns. Nefa misy ny tsy fahampian'ny CD iray - mora simbaina izy ireo, indraindray aza avy amin'ny fandefasana tsy ara- momba ny fahaiza-manao kely misy azy ireo ankehitriny mangina :)).
Alefaso ny doka tsy voavonjy
Good day. Heveriko fa maro ireo miasa matetika amin'ny antontan-taratasy ao amin'ny Microsoft Word no niatrika toe-javatra tsy mahafinaritra: nosafidiany-nanoratra ilay lahatsoratra, nanova azy, ary tampoka dia naverina ny solosaina (nanaisotra ny hazavana izy ireo, tsy fahombiazana anatiny).
Ahoana no fomba hamoarana ny rakitra misy rafitra miaraka amin'i Windows ary hamerina azy io indray (amin'izay tranga)
Good day. Misy karazana mpampiasa roa: ny iray mihemotra (antsoina koa hoe backups), ary ilay mbola tsy manao izany. Amin'ny ankapobeny dia tonga foana ny andro, ary ny mpampiasa ny vondrona faharoa dia mifindra mankany amin'ny voalohany ... Eny, 🙂 Ny fitsipika ara-moraly dia omena mba hampitandremana ireo mpampiasa izay manantena ireo fiarovana Windows (na tsy hitranga aminy mihitsy PE).
Black screen rehefa mamadika ny solosaina ianao ary manamboatra Windows. Inona no tokony hatao?
Hello "Fofomamy toy ny kerosena izany", hoy aho raha vao nahita ny mainty mainty taorian'ny nametahana ny ordinatera. Marina izany, maherin'ny 15 taona lasa izay, saingy maro ireo mpampiasa no mitaintaina amin'izany (indrindra raha misy angona manan-danja ao amin'ny PC). Mandritra izany fotoana izany, ny mainty mainty dia mainty, ny tranga goavana, amin'ny tranga maro, amin'ny zavatra voasoratra ao aminy, dia afaka misoritra sy manitsy ny fahadisoana sy ny fisoratana diso ao amin'ny OS.
Tafiditra ao anaty fahatsiarovan-tsain'ny Android ho toy ny fitahiranam-bahoaka sy ny famerenana angona
Ny fikojakojana ny angon-drakitra, ny sary nofantenana sy ny lahatsary, ny rakitra sy ny singa hafa avy amin'ny fahatsiarovana an-tserasera amin'ny finday sy tablety androany androany dia lasa asa sarotra, satria ny firaketana anatiny dia mifandray amin'ny alalan'ny protocol MTP fa tsy Mass Storage (toy ny USB flash drive) Maka rakitra ao amin'ity fomba ity.
Data Recovery amin'ny Handy Recovery
Na dia eo aza ny fandoavana ny programa fanarenana ny fampiasana Handy Recovery, tokony hanoratra momba izany ianao - angamba ity no iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra izay ahafahanao mamerina ireo rakitra miainga amin'ny sarimihetsika sarotra sy USB flash ao ambanin'ny Windows. Ny fizarana fizarana an'ilay fandaharana dia azo alefa amin'ny tranonkala ofisialy http://handyrecovery.com/download.
Diagnose sy troubleshoot PC (best software)
Hello Rehefa miasa ao amin'ny ordinatera, karazana tsy fahombiazana samihafa, ny fahadisoana indraindray, ary ny fijerena ny anton'ny fisehoany tsy misy rindrambaiko manokana dia tsy asa mora akory izany! Amin'ity lahatsoratra fanampiana ity dia te-hametraka ny fandaharana tsara indrindra aho mba hitsapana sy hamantarana ireo PC izay hanampy amin'ny famahana ny olana rehetra.
Data Fandraketana fandraketan-drakitra fandraketana rakitra ho an'ny Windows
Anatin'ity lahatsoratra ity, dia manolotra fijeriko ny fahafahan'ireo programa vaovao momba ny famerenana maimaim-poana Disk Drill for Windows. Ary amin'izay fotoana izay dia hanandrana isika, hoe ahoana no ahafahan'izy ireo mamerina rakitra avy amin'ny fantsom-piraketana formata (na izany aza anefa, dia azo atao ny mitsara ny vokatra ho eo amin'ny sarimihetsika tsy tapaka).